Maxaa Lagu Cabiri Karaa Halganka Ay Kujirto Xukuumada DDSI ? Maaulka Cakaaranews. - Cakaara News
Maxaa Lagu Cabiri Karaa Halganka Ay Kujirto Xukuumada DDSI ? Maaulka Cakaaranews.
Jigjiga(CN) Arbaco.March.18.2015, halganka ay kujirto xukuumada hadii si kooban looga hadlo waxaa lagu cabiri karaa laba qodob oo kala ah 1) horumarka iyo 2) taageerada horumarka iyo cadaawada horumar diidka.
Marka laga cabiro dhanka horumarka waxaan halkan lagu soo koobi karin marxaladihii isbadalka iyo halgankii dheeraa ee loo galay in lahelo wadada horumarka, balse waxaa maanta hubaal ah in horumarka xawliga ah ee ay xukuumadu wado uu yahay WAA BARYAY SACABO LAGUMA QARIN KARO.
Qorshaha horumar ee xukuumada oo ah mid kaduulay baahida shacabka ayaa horumar balaadhan laga gaadhay dhinacyada barnaamijka biyaha sida ceelasha ridada dhaadheer ee laga hirgaliyo dhulkii oomanaha iyo lama dagaanka ahaa taasoo bulshada xoolo dhaqatadu degaan rasmi ah kuheleen. Sidoo kale waxay xukuumadu horumar balaadhan kasoo hoyisay dhinacyada caafimaadka, wadooyinka (buundooyinka), waxbarashada, iyo dhamaan adeegayadii horumarineed oo dhan kuwaas oo si xawli ah u socda.
Hadaba marka laga eego dhanka natiijada wadadaas horumarineed ee xukuumada waxaa kaloo laga cabiri karaa taageerada isbadalkan horumarineed iyo cadawga ka xumaan kara, waxaana dabiici ah in meel shaqo iyo isbadal adag laga hirgaliyay ay jiraan shaqsiyaad ama kooxo iyagu ka duula danaysinimo ama mabaadii kale oo shisheeye kuwaas oo horumarka iyo isbadalku qaras ama elerjig kunoqonayo maadaama ay fikiro kale xanbaarsanyihiin.
Shacabka DDSI dal iyo dibad waxaa uu ku diirsaday kuna nabad iyo caano maalay isbadalka ay hirgaliyeen xukuumada DDSI iyo dawlada federaalka taasoo meesha kasaartay hagardamadii iyo dhiig miiradkii soo maray DDSI. Iyadoo ay shacabka iyo dhamaan inta samaha jecel ay kunaaloonayaan isbadalkan, ayaa waxaa sidoo kale halganka xukuumadan lagu cabiri karaa sida ay uga xunyihiin kooxda Duugii Dhargiga, Ginbood 7, Ubbo-Daacish, SSI iyo horumar diidka.
Waxaana tusaale loo soo qaadan karaa sida ay kooxdan u gubayso imaatinka iyo socdaalka madaxwaynaha ee dibada iyagoo xubnahooda ku dhuunta maraykanka ay isku dayeen in ay wax yeelo uga dhigaan WAH-WAHDA ayyga oo kale taasoo aan micnaba ugu fadhiyin hayaanka dheer ee ay DDSI ugu jirto horumarka iyo isbadalka shacabkeeda.